Dowladda federaalka oo war kasoo saartay diyaarado shalay lagu baaray degmada Wajeer – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda federaalka oo war kasoo saartay diyaarado shalay lagu baaray degmada Wajeer
Hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war kasoo saartay labo diyaaradood oo maaalintii shalay ahaa ka baxay Muqdisho kuna sii jeeday Nairobi, balse lagu baaray Wajeer.
Qoraal kasoo baxay hay’adda ayaa lagu sheegay in falkaaasi ay aad uga xun yihiin, balse waxay ku sheegeen sababta diyaaradahaan oo aan qaadan warqadaha duullimaadka waqtiyeesan ee ay bixiso wasaaradda gaadiidka Kenya.
Heshiiskii Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsanaa duullimaadyada tooska ah waa mid shaqeynayaa islamarkaana aysan jirin wax caqabad oo hortaagan, waxaana laga codsanayaa shirkadaha maamula diyaaradaha inay qaataan warqadaha lagama maarmaanka u ah duullimaadyada tooska ah, sida warqadda duullimaadka waqtiyeysan.
Hay’adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya waxay si aad ah uga xun tahay waqtiga ka dhumay rakaabkii saarnaa diyaaradaha lagu leexiyey Wajeer, waxayna rajeynaysaa inaysan dhicin markale.
Hay’addu waxa ay caddeysay in wixii hadda ka dambeeya aysan dhici doonin arrinta shalay dhacday oo kale.